Sidee loo helaa dib u qabsiyo badan oo dib loogu celiyo boggaaga?
Isla markii aad ganacsigaaga internetka sameysid, waxaad rabtaa inaad hesho jagooyinka sare ee natiijooyinka raadinta. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in aysan suurtagal ahayn in la helo darajo heer sare ah habeenkii. Waa in aad dhistaa olole adag oo isku xiran inta aanad bilaabin daawashada natiijooyinka koowaad ee hawlahaaga.
Qof kastaa wuu ogyahay in xiriirada siyaabo kala duwan loo kasban karo. Qeybaha qaar waxay keeni karaan qiimaha goobtaada gaarka ah, halka kuwo kale ay dhaawici karaan darajooyinkaaga boggaaga iyo burburin sumcaddaada caanka ah. Dhammaan xiriirinta waxay u qaybsan yihiin kuwa aan isku xirneyn oo aan nofollow lahayn. Maqaalkani, waxaan ka hadli doonaa fekradahaas labadaba waxaanu sharxi doonaa sida ay saameyn ugu yeelan karaan hawlaha SEO.
Noocaan noocyada dib u eegistu wuxuu loola jeedaa astaamaha HTML kaas oo loo isticmaalo in loo oggolaado in raadinta raadinta la raaco links. Haddii qof uu go'aansado inuu raaco domain adoo u maraya isku xirka dofollow, bots search, iyo sidoo kale kuwa isticmaala celcelis ahaan, waxay heli doonaan fursad aad ku raacdo goobtaada. Xidhiidhka Dofollow wuxuu isku dhaafiyaa juice isku-xiran wuxuuna keenaa taraafikada taraafikada boggagaaga wanaajinta booskaaga darajadaada SERP.
Mashiinnada Raadi waxay ogeysiiyaan isku xidhka xiriirka iyo hubi inta qof ee isticmaalaya ay ku xiran yihiin boggaaga si ay u fahmaan sida awooda u leh goobtaada. Goobaha tifaftiran ee tifaftiran ee boggaaga aad ka heshay, barta ugu badan ee laga yaabo Google waxa dhici karta inaad hesho.
Habka tooska ah ee lagu heli karo isku xirnaanta xiriiriyeyaasha waxay isticmaaleysaa ereyga raadinta ee ku habboon sida qoraalka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad si taxadar leh u doorataa ilaha webka ee aad ka hesho dib u celin dhab ah. Waa inay noqdaan kuwo leh sumcad, aad u aamminsan oo awood leh. Waxaa intaa dheer, waa inaad iskaashi la samaysaa ilaha la xidhiidha suuqa xorta ah. Tusaale ahaan, haddii aad hal ilbiriqsi ka hesho ilaha noocaas oo kale Forbes, Entrepreneur, New York Times waxay kuu keeni doontaa qiimo iyo qaddarin ka badan boqollaal kun oo qashinka dib-u-habboon oo qashinka ah. Sidaa daraadeed, xiriiro xiriiriya oo ka yimid ilaha websaydhada rasmiga ah waxay u adeegaan sida codadka dhabta ah ee ku kalsoonaanta Google.
Habka ugu muhiimsan ee loo helo tayada dhabarka ee tifaftirka waa soo gudbinta waxyaabaha wanaagsan ee internetka. Haddii aad boggaaga siiso dadka isticmaala maadooyinka ku habboon oo ku mashquulsan ee qiimaha wargelinta, ilaha kale ee webka waxay u eegi doonaan macluumaadka qiimaha leh iyo si ikhtiyaari ah ula wadaagaan kuwa kale. Waa hab dabiici ah oo lagu heli karo juice juice si aad goobtaada. Dhibaatada kaliya ee aad la kulmi karto ololahaaga dabiiciga ah ee isku xirnaanta dabiiciga ah waa in ay qaadan doonto wakhti yar marka bogaggaaga bogguna ay ku bilaabi doonaan liis hoose bog.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo xoojiyo geedi socodkan. Waxaad ku dhiiri galin kartaa dib u qaabeyn dhab ah domainkaaga adigoo ku martiqaadaya boggaga internetka si aad uhesho dib u qabasho dofollow ah oo ku saabsan mawduucaaga. Waa inaad sameysid gadaal u samee boggaaga sida ugu sahlan. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa martiqaad aad ku xidhiidhi karto macluumaadkaaga iyo cinwaanka URL ee boggaaga internetka Source .